Website တည်ဆောက်ဖို့ hosting တွေမှ wordpress ကို install လုပ်နည်းများ - အမေ့သားလေး.... @ mixxt
ဒီလိုဗျာ အင်တာနက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးတွေ၊ လေ့လာဖြစ်တာလေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်နေရာတလေးတစ်ခုလုပ်ပြီး Blog လေးတွေရေးလာကြတယ်။ တစ်ချို့လည်း social network တွေမှာရေးတယ်။ အခုက ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာ Blogger တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ ကိုယ်ပိုင် site တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကိုပြောမလို့ပါ။
website တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ အားကြီးရှိတာပေါ့လေ
ဒါပေသိ ကျနော်အနှစ်သက်ဆုံးနဲ့ အခုသုံးဖြစ်တဲ့ CMS (Content Management System) က wordpress ပါ။ hosting တစ်ခုကနေ wp ကို install လုပ်ပြီး သုံးထားပါတယ်။
အဲ့လို hosting ကောင်းကောင်းတစ်ခုကနေ wp ကို install လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရေးထားတဲ့ စာအုပ် ၂ အုပ်ကို ယူပြီး ဖတ်ကြည့်ပြီး လုပ်ရင် wordpress website ကောင်းတစ်ခုရမှာပါ။
Download (Filesize = 0.98MB) >> https://sites.google.com/site/sawsanpku/making-wordpress-blog.pdf
Download (Filesize = 1.05MB) >> https://sites.google.com/site/sawsanpku/WPUserGuidebyZuzuaung.pdf
နောက် wordpress install စလုပ်မယ့်သူတွေအတွက် ကိုစေတန်ရေးတဲ့
Download (Filesize = 492KB) >> https://sites.google.com/site/sawsanpku/Cpanel.pdf
နောက်တစ်ခုက wordpress အတွက်တော့မဟုတ်ဘူး
ကိုညီလင်းဆက်ရေးတဲ့ blogspot လုပ်နည်း
Download (Filesize = 6.73 MB) >> https://sites.google.com/site/sawsanpku/howtomakemyanmarblog.pdf
ကြုံတုန်း နောက်ထပ် gmail & gtalk အသုံးပြုနည်းအစုံရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး
အင်တာနက်ကို အခုမှ စသုံးမယ့်သူတွေအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ ရေးသားသူက habbeam.blogspot.com ကလို့ သိရပါတယ်။
အတော်ကို စုံလင်ကောင်းမွန်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။
Download (Filesize = 19.9MB) >> https://sites.google.com/site/sawsanpku/veryeasyusefulforgmailandgt...
ကျနော် အင်တာနက်စသုံးခါစက ဖတ်ဖို့ စုစုထားတဲ့ နည်းပညာသမားတို့ရဲ့ နည်းပညာ မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ရီစရာ ဟာသလေးတွေ ..
Donwload (Filesize = 435KB) >> https://sites.google.com/site/sawsanpku/Technology.knowledge%2Cetc.TXT
နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့က ကျနော်အခုသုံးနေတဲ့ fhc ကနေ hosting ယူပြီး wp ကို install လုပ်နည်းပါ။
ဒါကတော့ ကျနော့ သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ ညီငယ် K ဆိုတဲ့ ကွန်ပျုတာကျောင်းသားလေးရေးထားတာပါ။
Installation Wordpress With Freehostingcloud | K's Dream
အခုဆိုရင် Online ပေါ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Blog တွေတင်လာကြပါပြီ။ တစ်ချို့က Blogspot ကိုသုံးတယ်။ တစ်ချို့ ကျတော့ WordPress ကိုသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက WordPress ကို Hosting ယူပြီး အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ WordPress ကို Hosting ယူတာကို ကျွန်တော့် အရင်တခြားသူတွေ ပြောဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အခု ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက freehostingcloud နဲ့ Hosting ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ။် freehostingcloud ကိုကြားဖူးတဲ့သူတွေလည်းရှိချင် ရှိမှာပါ။ Freehostia တို့ 000webhost တို့နဲ့ ယှဉ်ရင် သူတို့ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ Freehostia မှာ Sing Up လုပ်ပြီးရင် Account ကို Activate လုပ်ဖို့ အများဆုံး မိနစ် သုံးဆယ်စောင့်ရပါတယ။် 000webhost ကကော??? မသိဘူးဗျ။ ကျွန်တော်စမ်းတုန်းကတော့ ၂၄ ကြာတဲ့အခါမှာတော့ Thank You For Sing Up ဆိုပြီး Mail တစ်စောင်ပို့တယ်။ ဒါပေမယ့် Account ကတော့ Verification in progress ပဲဖြစ်နေတုန်းပါ။ စာထဲကအတိုင်းဆိုရင်တော့ Hosting ယူဖို့အတွက် $5 ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လုပ်တောင်မလုပ်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် freehostingcloud ကကော ဘယ်လောက်ကြာလဲ? ချက်ချင်းရပါတယ် … ကျွန်တော်ပြောတာကို မယုံတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်ပဲလေ။ အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တာကို ပြောပြချင်လို့ပါ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော် အဆင့်ဆင့် Sing Up လုပ်ပုံကို အဆင့်ဆင့်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။
ပထမဆုံး www.freehostingcloud.com မှာကိုသွားလိုက်ပါ။
ပုံထဲက Page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်… ကျွန်တော် ၀ိုင်းပြထားတဲ့ ORDER! $0.00/month ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံကိုရောက်သွားပါမယ်။
အဲဒီမှာလည်း ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့အတိုင်း I want to useafree subdomain. ကိုရွေးပါမယ်။ နောက် Blank နေရာမှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ subdomain name ကိုရေးထည့်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ကိုယ့်တင်မယ့် Web-page ရဲ့ နာမည်ဖြစ်မှာပါ။ www.yourname.freehostingcloud.com ပေါ့ဗျာ … ပြီးရင်တော့ ဘေးနားက ကပ်လျှက်ခလုပ်လေးကိုနှိပ်ပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်ပါပြီ။ အဲ့ဒီမှာလည်း လွယ်ပါတယ်။
သင့်လုပ်မယ့် website ရဲ့အကြောင်းကို အနည်းငယ်ပြောခိုင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ ရေးချင်တာရေးပြီးသွားရင်တော့ UPDATE CART ကိုနှိပ်ပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ဗျာ..
အဲ့ဒီအဆင့်မှာတော့ CHECKOUT ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ EMPTY CART ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ်လုပ်ထားသမျှအကုန်အစအဆုံးပြန်လုပ်ရမှာပါ။ CONTINUE SHOPPING ဆိုရင်တော့ ORDER မှာတဲ့နေရာကိုရောက်မှာပါ။ အဲ့တော့ CHECKOUT ကိုပဲနှိပ်ပါမယ်။
First Name နဲ့ Last Name မှာကိုယ့်နာမည်၊ နောက် Company Name ကိုရှိရင်ဖြည့်ပါ။ မဖြည့်လည်းထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ Email Address ဖြည့်ပါမယ်။ နောက် Addresss 1 ကိုဖြည့်ပါမယ်။ Address2ကိုတော့ ဒီတိုင်းထားခဲ့လည်းရပါတယ်။ နောက် City နဲ့ State နှစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ပါမယ်။ Zip Code ကိုတော့ 11234 ပဲထည့်ပါ။ ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါတိုင်း အဲ့ဒီ Zip Code ပဲထည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ့် Zip Code ကိုယ်သိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်။ နောက် … Country မှာတော့ ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုကိုယ်ရွေးပါမယ်။ အရေးကြီးတာရောက်လာပါပြီ။ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရပါတော့မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖုန်းနံပါတ် 095000000 ဆိုရင် အဲ့ဒီမှာ 9595000000 ကိုထည့်ပါမယ်။ ရှေ့က 95 က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Code ပါ။ နောက်က ဂဏာန်းတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့။ နောက်ပြီးရင် Password ကိုထည့်ပါမယ်။ နောက်ပြီးရင် FREE ကိုသူခြစ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပုံထဲမှာ ပါမလာတာတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်။ ဟိုးအောက်မှာ အမြဲတမ်း Sing Up လုပ်ရင် လုပ်နေကြ I Agree Term of Services ကိုခြစ်ပေးပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ COMPLETE ORDER ကိုနှိပ်ပါမယ်။ အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ ချက်ချင်းဆိုသလို ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ Mail ထဲကို Congratulation ဆိုပြီးရောက်လာပါမယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ FTP server၊ DNS server တွေကို နံပါတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းပို့ပေးပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံကိုရောက်သွားပါတယ်။
Welcome to Account Center စာမျက်နှာကိုရောက်သွားရင်တော့ Website Login အောက်မှာရှိတဲ့ ကိုယ့် Website ဘေးမှာက Login ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် CPanel ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။ CP ထဲကိုရောက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။
ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ Hosting Features ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့အောက်မှာ List တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပုံထဲကအတိုင်း SimpleScripts ကိုရွေးပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို Scripts တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါမယ်။ Simple Scripts တွေတော်တော်များများစုံတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ WordPress, Durpal, Joomla .. အများကြီးပါ။
WordPress ကိုရွေးပါမယ်။ Freehostingcloud မှာ WordPress 3.0 Stable အထိ 1-click install လုပ်လို့ရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ WordPress ကို Installation စလုပ်ပါတော့မယ်။
ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ Install ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်ပါပြီ။
Install လုပ်မယ့်နေရာကို သူ့ဟာသူရေးပေးထားပါတယ်။ WordPress Version ကိုလဲကိုယ်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ( 3.0 ပဲရွေးမှာမဟုတ်လား? သိနေတယ်လေ .. အဟတ် ) ပြီးရင်တော့ Step 2: က Generate random admini username and psw ကိုအမှန်ဖြုတ်ထားပါမယ်။ အဲ့အောက်မှာ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ Username နဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Auto-generated မဟုတ်ပါဘူး။ wp-admin ၀င်တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ Username နဲ့ Psw ရိုက်ထည့်ပြီးဝင်လို့ရပါတယ်။ ( Username ထည့်တဲ့ Blank ကျန်ခဲ့လို့ပါ … Password အပေါ်မှာပါပါတယ်ဗျ )… Step 3: မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း I have read the terms … ကို အမှန်ခြစ်ပါမယ်။ နောက်ပြီးရင်တော့ Complete ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Installation လုပ်နေတာကိုပြပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ Installation လုပ်ပြီးကြောင်းပြပြီး သင့် www.yourname.freehostingcloud.com ကိုဝင်လို့ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ Website ကို Activate လုပ်ဖို့အတွက် သူပေးထားတဲ့ www.yourname.freehostingcloud.com/wp-admin/ ဆိုပြီးဝင်လိုက်ရင် Username နဲ့ Psw ကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ Dashboard ကိုရောက်ပါပြီ။ ပြီးရင်တော့ သင့် Website ကို ၀င်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ source : www.k-dream.tk
အခု fhc ကနေ wp install လုပ်နည်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်
အခု fhc ကနေ wordpress ကို install လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျနော်တို့ site တွေကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ fhc ကနေ hosting ယူဖို့က မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ ip ကို ban ထားပါတယ်။ freedom သုံးပြီး ယူမှရပါတယ်။
Freedom သုံးနည်းကို K ရေးထားတာလေးရှိပါတယ်။
ဖရီးဒမ်ဆာဗာ အောက်က Address မှာ ems.resolution.de ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Port မှာ 443 ကိုထည့်ပါ။ နောက် Options ထဲက မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ အရာသုံးခုလုံးကို Mark လုပ်ပေးပါ။ နောက် Account Information မှာ ခုနက Sing Up လုပ်ထားတဲ့ နာမည်နဲ့ စကားဝှက်ကို ထည့်ပေးပါ။
Proxy Setting ထဲမှာတော့ ကိုယ့်စက်ရဲ့ Proxy ကိုထည့်ပေးပါ။ ( ကျွန်တော်ဆိုရင် Proxy Address မှာ 192.168.1.1 : Proxy Port မှာ 8080 ကိုထည့်ပါတယ်။ )
ကဲ ... ကြိုက်တဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်ပါ။ Access Denied တို့လည်းကင်းဝေးပါပြီ။ ( ultrasurf မှာတောင် ultrasurf က ဘန်းထားတဲ့ site တွေရှိပါသေးတယ်။ Freedom မှာတော့ မရှိပါဘူး ) ... နောက်ပြီး Freedom က connection အဆိုးကြီးမဟုတ်ရင် အတော်လေးသုံးလို့ကောင်းပါတယ်... အဟတ်
freedom က fhc မှာ hosting ယူတုန်းပဲသုံးရတာပါ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆင်ပြေပြေဆုံးလို့ရပါတယ်။ အခုကျနော်တို့ သုံးထားတဲ့ fhc က ip ban ထားတဲ့အတွက် လုပ်ရတာ အခုလို နည်းနည်လေးခက်ချင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းဆို freedom သုံးပြီးယူတာတောင် တစ်ခါတစ်ခါ မရချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပေါ်မှာပေးထားတဲ့ www.mmwordpress.com က အကိုတွေရေးတဲ့ wp install လုပ်နည်းစာအုပ်နဲ့ ကိုဇူးဇူးအောင်ရေးတဲ့ wp install လုပ်နည်း စာအုပ်တွေထဲက နည်းတွေကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော်တို့ fhc လို ip ban ထားတာကို ကျော်ပြီး မရရအောင်ယူရတာမျိုးတွေ မရှိပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့လို ခေါင်းမရှုပ်ရအောင် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ wp install လုပ်နည်း စာအုပ် ၂ အုပ်ကိုဖတ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ သုံးသလို fhc မှ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း သုံးပါ။ freedom ကိုသုံးပြီး ဒီ fhc ကနေ hosting ယူ wp ကို install လုပ်ပြီး website တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အဆင်မပြေခဲ့ရင် sawsan9one.tk@googlemail.com နှင့် jimmyokkar23@googlemail.com ကို mail ပို့ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် invite လုပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် မေးလို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ဒီ Blog က Open Source ပါခင်ဗျာ ပြန်လည် မျှဝေနိုင်ပါတယ်။